ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 36
Posted on December 28, 2011 by chitnge
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -36 သစ္စာဝါဒီ အသျှင်နန္ဒ၀ံသ (မဟာဝိဇ္ဇာ)ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်ဝိပဿနာ နည်းပညာ – အဆက် . . . ဒုက္ခခပ်သိမ်း ကင်းပြတ်ငြိမ်းတဲ့အခါ ဒုက္ခ မရှိတော့တဲ့ ဒုက္ခမရှိလို့ သုခကြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သဘောကို အပျက်ရှုတဲ့ဉာဏ်မှ ရင့်သန်ပြီးတော့ သွားတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီအခါမှာ အော် . . . ဒုက္ခကမ္ဘာ ဆိတ်သုဉ်းချုပ်ငြိမ်း တော့ သုခကို တွေ့ရတယ်။ အပျက်ကမ္ဘာ ဆိတ်သုဉ်းချုပ်ငြိမ်းတော့ မပျက်တဲ့ သဘောကို တွေ့ရတယ်။ အော် . … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်	| Leaveacomment
Posted on December 7, 2011 by chitnge
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -34 သစ္စာဝါဒီ အသျှင်နန္ဒ၀ံသ (မဟာဝိဇ္ဇာ)ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်ဝိပဿနာ နည်းပညာ – အဆက် မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ နိရောဓကို မျက်မှောက်ပြုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ၊ နိရောဓသစ္စာဉာဏ်တွေရတော့ `နိရောဓဉာဏံ သဿတဒိဋ္ဌိံ နိဝတ္တေတိ ကသ္မာ ဟေတုနိရောဓာ ဖလနိရောဓောတိ ဒဿနတော´ နိရောဓဉာဏ် ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောကို ရှုလိုက်တဲ့ ဒီဉာဏ်သည်သဿတဒိဋ္ဌိံ နိဝတ္တေတိ ရုပ်နာမ်ဒုက္ခ ဆက်ဖြစ်ရဦးမှာဘဲ၊ ငါဟာ ဒုက္ခဆက်ဖြစ်ရဦးမှာဘဲ၊ ငါ့လိပ်ပြာကလေး ဆက်ပြီး ဘ၀တွေ ဘ၀တွေ ဖြစ်နေဦးမှာဘဲလို့ အဲဒီလို အယူအဆ လွဲမှားနေတဲ့ ဒိဋ္ဌိကို ကုန်စင်စေတယ်၊ … Continue reading →
Posted on December 6, 2011 by chitnge
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -33 သစ္စာဝါဒီ အသျှင်နန္ဒ၀ံသ (မဟာဝိဇ္ဇာ) ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော် ၀ိပဿနာ နည်းပညာ – အဆက် သစ္စာတရား ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ ဇွဲတွေ သတ္တိတွေ ၀ိရိယတွေ သဒ္ဓါတွေ ပညာတွေ အမျိုးမျိုး လိုအပ်တဲ့ အကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံး ဆောက်တည်ခဲ့တဲ့၊ ကိုယ်တွေ့ ဗဟုသုတနှင့် ရောယှဉ်ပြီးတော့လည်း ဟောခဲ့ပြီ။ ဒီနေ့ညတော့ သစ္စာတရားကို တွေ့ရှိခြင်းခေါ်တဲ့ တရားတော်မြတ်ကို ဟောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ယနေ့ ရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မယောဂီ ပရိသတ်တို့အား `သစ္စာတရားကို တွေ့ရှိခြင်း´ ခေါ်တဲ့ … Continue reading →
Posted on December 5, 2011 by chitnge
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -32 သစ္စာဝါဒီ အသျှင်နန္ဒ၀ံသ (မဟာဝိဇ္ဇာ) ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော် ၀ိပဿနာ နည်းပညာ -အဆက် ၀ိပဿနာ နည်းနိဿယနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ၀ိပဿနာ နည်းပညာကို ဟောခဲ့ပါတယ်။ ၀ိပဿနာ နည်းပညာဆိုတာကတော့ သစ္စာတရားကို ရှာဖွေလိုတဲ့ယောဂီများ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရမဲ့ လက်နက်ခဲယမ်း မီးကျောက်တွေ၊ လက်နက်ကရိယာ တန်ဆာပလာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သစ္စာတရား တည်းဟူသော ရတနာပန်းကုန်း ကို ဆွတ်ချူဘို့အတွက် ဒီတံချူမပါလျှင် မရနိုင်လို့ ၀ိပဿနာနည်းပညာကို စတင်ပြီးတော့ အဖွင့်အနေနှင့် ဟောခဲ့ပါတယ်။ ၀ိပဿနာ နည်းပညာမှာ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, အရိယာ	| 1 Comment
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 31
Posted on December 4, 2011 by chitnge
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -၃၁ ၆။ သာသနာတော် စည်ပင်သာယာစေခြင်း တရားတော် ကောက်ချက်များ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာ ဆိုသည်မှာ မြင့်မြတ်လှစွာသော သဗ္ဗညုတ ရွှေဉာဏ်တော်ရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ အဆိုအဆုံးအမများပင် ဖြစ်သည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆိုအဆုံးအမများသည် ရုပ်နာမ်ရှိသူတို့ အတွက် ငြိမ်းအေးချမ်းသာမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရုပ်နာမ်တို့အား ဆင်းရဲပူလောင်စေသော လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟမီးများကို မဂ်ရေစင်ဖြင့် ငြိမ်းသတ်၍ ငြိမ်းအေးစေနိုင်သည်။ မဂ်ရေစင်ကို မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်၌ ရရှိလေသည်။ ထို့ကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်သည် စည်ပင်သာယာစေရန်လည်းကောင်း၊ အဓွန့်ရှည် … Continue reading →
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -30 သစ္စာဝါဒီ အသျှင်နန္ဒ၀ံသ (မဟာဝိဇ္ဇာ) ၏ တရားတော် ကောက်ချက်များ ၁။ ဗုဒ္ဓ၏ သာသနာ့ အရိပ်အောက်သို့ ၀င်ရောက်ခိုလှုံခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ တရားတော် ကောက်ချက်များ။ ၂။ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်အကြောင်း တရားတော်ကောက်ချက်များ။ ၃။ ၀ိပဿနာ နည်းပညာ တရားတော် ကောက်ချက်များ။ ၄။ မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ် တည်ဆောက်အား ကောင်းခြင်ဆိုင်ရာ တရားတော်များ။ ၅။ စိတ္တာနုပဿနာ သိမှတ်ခြင်းနှင့် ရှုသတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ တရားတော်ကောက်ချက်များ။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, ရဟန္တာ	| Leaveacomment
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ကိလေသာ ကုန်ခန်းခြင်း ကိလေသာ ကုန်ခန်းစေသော ကျင့်စဉ်မှာ ၀ိပဿနာ နည်းပညာဖြစ်သည်။ ၀ိပဿနာ နည်းပညာ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ပေါ်လာသမျှ စိတ်တို့ကို ဉာဏ်ဖြင့် အပျက်ရှုသတ်ရသော နည်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အပျက်ရှုသောအခါ မည်သည့် အကျိုးထူးများ ရရှိနိုင်ပြီးနောက် ကိလေသာများ ကုန်ခန်းပြီး ရဟန္တာ ဖြစ်နိုင်ပါသနည်း။ ရှေးဦးစွာ ပေါ်စိတ်ကို အနိစ္စ ရှုသတ်သဖြင့် ရှုသောဉာဏ်သည် အင်အားကောင်းလာခြင်း အရှုခံ အပယ်ခံ အသတ်ခံ စိတ်တို့သည် ကိလေသာလျော့ပါးခြင်း တည်းဟူသော Tags: ၀ိပဿနာ, … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, ရဟန္တာ	| Leaveacomment
နိဗ္ဗာန်သည် ဘာမှ မရှိဟုဆိုရာဝယ် နိဗ္ဗာန်သည် ဘာမှမရှိပါ။ သုညတကြီးမို့ ဘာတစ်ခုမှ မရှိပါဟု ဆိုရာ၌ ဘာမှမရှိ၊ ဘာတစ်ခုမှ မရှိဟုဆိုသော အနက်သဘောကို မည်သို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုပါမည်နည်း။ ဘာတခုမှ မရှိဟု ဆိုရာဝယ် ဒုက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာတခုမှ မရှိခြင်းကို ဆိုလိုပေသည်။ ဒုက္ခမရှိလျှင် သုခတော့ ရှိသလားဟု မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သုခရှိသည်ဟု ဖြေဆိုရပါလိမ့်မည်။ နိဗ္ဗာန်တွင် စိတ် ရုပ်တို့ ချုပ်ငြိမ်း ရုပ်သိမ်းသွားသည်ဖြစ်၍ မည်သို့ သုခရှိနိုင်ပါမည်နည်းဟု စောကြောနိုင်သည်။ နိဗ္ဗာန်တွင် … Continue reading →
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ\_ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနည်း * နိဗ္ဗာန်သည် ရုပ်နာမ်၏ ချုပ်ရာဖြစ်သည်။ * နိဗ္ဗာန်သည် ဒုက္ခကို လက်မခံပါ။ * ဒုက္ခသည် အလိုလို မချုပ်ပါ။ * သမုဒယကိုသတ်မှ ဒုက္ခသေပါသည်။ * နိဗ္ဗာန် မျက်မှောက်ပြုလိုသူသည် သမုဒယကို သတ်နိုင်ရပါလိမ့်မည်။ * သမုဒယ ရှင်သန်နေသေးသမျှတော့ နိဗ္ဗာန်နှင့် နီးစပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ * ထိုသို့ဆိုသဖြင့် နိဗ္ဗာန် မျက်မှောက်ပြုနေခြင်း သည်ပင်လျှင် Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ခန္ဓာဇတ်သိမ်း လွတ်ငြိမ်းရာရှာ ရုပ်နာမ်ကို မုန်းလိုသူတို့သည် ရှေးဦးစွာ စိတ်နှင့် မမုန်းနှင့် ဉာဏ်နှင့်မုန်းပါဟု အကြံပြုလိုသည်။ ဉာဏ်မှာ မုန်းရန် အင်အားမပြည့်စုံသေးပါဟုဆိုလျှင် ဉာဏ်အင်အား မကောင်းမီ ဉာဏ်ဦးစီး၍ လုပ်ကြံမုန်းပစ်လိုက်ပါဟု တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ လုပ်ကြံမမုန်းသေးသမျှ အစစ်အမှန် မုန်းတီးလာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပုထုဇဉ်များအနေနှင့် တသံသရာလုံးက ချစ်ခင်လာခဲ့သောကြောင့်ပေတည်း။ ခန္ဓာဇတ်သိမ်း လွတ်ငြိမ်းရာ ရှာဖွေလိုသူတို့သည် Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ အတွင်းအောင်မြင်ခြင်း လူသည် အတွင်းအောင်မြင်ရန် အထူး အရေးကြီးလေသည်။ အတွင်းအောင်မြင် ပြီးစီးသွားလျှင် အပြင်အတွက် ပူပန်စရာ မလိုတော့ချေ။ အတွင်းသည် အနှစ်သာရပိုင်းဖြစ်၍ အပြင်သည် အသွင်သဏ္ဍန်ပိုင်း ဖြစ်သည်။ အနှစ်သာရပိုင်း အောင်မြင်ပြီးလျှင် အသွင်သဏ္ဍန်ပိုင်းအတွက် အကြောင်းပြုစရာ မလိုတော့ချေ။ အကြောင်းလဲ ပြုတော့မည် မဟုတ်တော့ချေ။ လူသည် အပြင်ကို မမှီခိုအပ်၊ အတွင်းအောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက်သာ မှီခိုအပ်သည်။ အတွင်းသည် အောင်မြင်နိုင်ခဲ၏။ အတွင်းတကာ့ အတွင်းပိုင်းတို့တွင် စိတ်၏ ဟိုး အတွင်းပိုင်းကို အောင်မြင်နိုင်မှသာလျှင် အမှန်တကယ် Tags: … Continue reading →
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ တဏှာကို အဘယ်ကြောင့် ပယ်ရသနည်း တဏှာကို လက်ခံခြင်းသည် ယုတ်ညံ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တဏှာကို မအောင်နိုင်သေးသည်ထားဦး အောင်နိုင်ရမည့်တရားဟု နားလည်ထားသင့်သည်။ တဏှာသည် အားလုံးသော ဒုက္ခ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ တဏှာကိလေသာ ကင်းစင်တော်မူပါပေသော မြတ်စွာဘုရားအား ကြည်ညိုသူတို့သည် တဏှာကို အားပေး၍ မဖြစ်နိုင်ပေ။ တဏှာစင်မှ ဘာဝနာမင်မည်။ တဏှာကင်းမှ အလင်းရမည်။ တဏှာမကုန်လျှင် ဘာဝနာ မစုံလင်ဘဲ ခုံမင်တပ်မက်မှုဒဏ် ရုပ်နာမ်ခံရမည်။ တပ်မက်စရာ မဟုတ်သည်ကို တပ်မက်သဖြင့် မဖြတ်ရက်ဘဲ အပြတ်ငဲ့နေလျှင် တရစပ် နှဲ့နေသော နာကျင်သည့် ဝေဒနာ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, ဟဒယ	| Leaveacomment
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ သမုဒယကို ဘာကြောင့်ပယ် သမုဒယကို ဘာကြောင့် ပယ်ကြရပါသနည်း ဆိုသော် မပယ်လျှင် လက်ခံရမည်သာ၊ သမုဒယကို လက်ခံလျှင် မိမိ၏ ရုပ်နာမ်၌ ဖြစ်ပေါ်သော စိတ္တသင်္ခါရ၊ ၀စီသင်္ခါရ၊ ကာယသင်္ခါရတို့သည် ဘာနှင့်ယှဉ်ကြမည်နည်း။ ၀ိဇ္ဇာနှင့်လော၊ အ၀ိဇ္ဇာနှင့်လော၊ အ၀ိဇ္ဇာနှင့်သာ ဖြစ်မည်။ သမုဒယကို လက်ခံသော သင်္ခါရတိုင်း၌ အ၀ိဇ္ဇာ ဦးစီးနေမည်သာ။ အ၀ိဇ္ဇာ ဦးစီး၍ သမုဒယကို လက်ခံသော သင်္ခါရများ ဖြစ်ပေါ်နေရသည်။ အ၀ိဇ္ဇာ ဦးစီးနေလျှင် အယောနိသော မနသီကာရ ဖြစ်မည်မုချ။ နှလုံးသွင်းများစွာ မှားယွင်းနေမည် … Continue reading →
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ တရားစစ် တရားမှန် လိုချင်မှု အများအားဖြင့် ယောဂီများသည် တရားစစ် တရားမှန်ကို ရလိုချင်ကြသူများ ချည်းသာဟု မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိ မှတ်ယူထားကြလေသည်။ သို့သော် . . . လုံးဝဥဿုံ ရလိုမှု ပြည့်ဝစွာ တည်ရှိနေစေရန် လွန်စွာအရေးကြီး လေသည်။ ထမင်း မဆာ့တဆာ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကျွေးမွေးရသည်ထက် လွန်စွာမှ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသူကို ကျွေးမွေးရသည်က တန်ဖိုးရှိလှပေသည်။ မဆာ့တဆာ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ချက်ပြုတ်ခူးခပ်ကျွေးရာ အချို့အန်ပစ်တတ် ကြလေသည်။ သာမန်အားဖြင့် အန်ပစ်၍ မရရှိလျှင် … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ	| Leaveacomment
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ ဇွဲ လုံ့လ မည်သည့်အမှုကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ရသည်ဖြစ်စေ၊ ဇွဲလုံ့လသည် အရေးကြီးလှသည်သာဖြစ်သည်။ အလုပ်တစ်ခုမှာ အကျိုးရှိမည် သေချာပါက ဟုတ်မှန်ရာလည်း ဖြစ်နေလျှင် ဇွဲရှိရှိနှင့် ကြိုးစားထိုက်သည်သာ ဖြစ်သည်။ ဇွဲသည် လုပ်ငန်းပြီးစီးသည်အထိ တွန်းပို့ပေးနေရမည်။ တချိန်ထက် တချိန် လုပ်ငန်းပြီးစီးဘို့အတွက် ပိုမိုနီးစပ်စေရမည်။ ကြီးကျယ်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်က ရုတ်တရက် ချက်ခြင်းတော့ ကိစ္စ ပြီးမသွားနိုင်ချေ။ ထိုအခါ ဇွဲ လုံ့လ ဥဿဟသည် လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကြီးကျယ်မွန်မြတ်သည်နှင့်အမျှ အထူးလိုအပ်နေ တော့သည်သာ ဖြစ်သည်။ ဇွဲသည် … Continue reading →